Ungayikhetha kanjani isibonakude: izici, isabelomali kanye nesipiliyoni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ungayikhetha kanjani isibonakude
Kubo bonke abantu abathanda ukubuka isibhakabhaka ebusuku, isibonakude esihle kungumbono omuhle. Le divayisi yokubuka inezici ezahlukahlukene okufanele zilungiswe ngayinye. Kunezinkulungwane zezinhlobonhlobo okufanele zicatshangelwe futhi amamodeli amaningi ezimakethe ngamanani ahlukene. Ngakho-ke, lapha sizokufundisa ukuthi ungayikhetha kanjani isibonakude ukubhekelela zonke izici okufanele uzicabangele nenhloso enkulu oyisebenzisela zona.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi ungayikhetha kanjani isibonakude maqondana nekhwalithi nentengo oyidingayo.
1 Ungayikhetha kanjani isibonakude ngokwesabelomali sakho
1.1 Izibonakude ezingama-euro angama-200 noma ngaphansi
1.2 Ama-telescopes afinyelela kuma-euro angama-500
1.3 Ama-telescopes afinyelela kuma-euro angama-800
1.4 Ama-telescope avela kuma-euro angama-1000
2 Ungayikhetha kanjani isibonakude ngokwesikhathi sokubuka
3 Ungayikhetha kanjani isibonakude ngokuya ngokubona kwakho
Ungayikhetha kanjani isibonakude ngokwesabelomali sakho
Into yokuqala okufanele ibhekwe yisabelomali. Kuyinto ebaluleke kakhulu. Akusizi ngalutho uma unolwazi oluningi ngokubheka isibhakabhaka, isayensi yezinkanyezi, njll. Uma ungenayo imali eyanele yokuthenga isibonakude esezingeni eliphezulu. Sizozama ukuhlukanisa izibonakude ezahlukahlukene ezingasisiza ngokwezabelomali ezahlukahlukene esingathembela kuzo.
Izibonakude ezingama-euro angama-200 noma ngaphansi
Akuvamile ukuthi singathola isibonakude esikahle ngaphansi kwale ntengo. Kufanele ucabange ukuthi uma sithenga isibonakude esiyisisekelo esinjalo bese sithola ukuthi uyayithanda inkanyezi, uzofuna ngokushesha ukuthenga okuthile okungcono futhi lawa ma-200 angabe esasebenziseka kancane. Esikhundleni salokho, uma wonga futhi uthenge okuthile okungcono, ungayisebenzisa ngokunenzuzo isikhathi eside futhi uthole okuningi ngokutshala kwakho imali.
Khumbula ukuthi le ntengo ayanele ukuba nesibonakude esihle esiphelele esine-tripod and mount. Imvamisa bane-optics ebampofu noma intaba engazinzile. Lezi yizici ezibalulekile ukuze kuqinisekiswe ukubonwa okuhle kwesibhakabhaka. Sincoma izibonakude ezinhle kodwa kuthatha isikhathi esithe xaxa ukuqala ukubona ezinye izinkanyezi ezibaluleke kakhulu.
Ama-telescopes afinyelela kuma-euro angama-500
Ukuphahlaza isabelomali esithe xaxa ngokwengeziwe. Yiqembu lesabelomali lelo Kungasinika injabulo kanye nokudumala okukhulu. Kulezi ziningi asikwazi ukuthola izinto ezinhle kakhulu nezinye izinto ezimbi kakhulu. Lesi yisizathu esenza ukuthi wazi ukuthi ungakhetha kanjani kahle. Kuleli banga lamanani singathola izibonakude ezifanele ukuqala esikhungweni sezinkanyezi ezizinzile futhi esinokuvula okukhulu. Imvamisa kulula ukuphatha, yize bengenayo imoto. Ayifanele i-astrophotography futhi inzima ngandlela thile.
Singathola futhi ezinye ezihloniphekile uma nje sibheja ezintabeni ze-azimuth nakwezibonakude ezisezingeni eliphezulu.
Ama-telescopes afinyelela kuma-euro angama-800
Ngenye yezabelomali ezilula kakhulu kulabo abasha kusayensi yezinkanyezi. Sihamba ngamanani entengo lapho singathola khona imishini eminingi esezingeni eliphakeme. Ngokunikezwa kokuhlukahluka okukhulayo kwamamodeli, isinqumo sizoncika kakhulu kokuthandwayo kwethu, izintshisekelo kanye nokuthandayo. Kuluhlu lwamanani olusengozini ngandlela thile lapho singathola khona okokusebenza okuhle kakhulu kepha okunye okungahambelani nalokho esikufunayo.
Ama-telescope avela kuma-euro angama-1000
Yilapho indawo yonke yamathuba ivuleka khona. Singathola ukukhweza kwekhwalithi ephezulu okusivumela ukuthi sibe nezibonakude eziningana esingazisebenzisa entabeni eyodwa. Ngisho nokukwazi ukuqala umhlaba we-astrophotography ngokunethezeka okukhulu.. Singathola futhi ezinye izibonakude ezingasetshenziswa ngeselula ezisishiye sivule imilomo.
Ungayikhetha kanjani isibonakude ngokwesikhathi sokubuka
Esinye sezici ezibalulekile zokufunda ukuthi ungayikhetha kanjani isibonakude yisikhathi ozokwazi ukusinikezela ekubhekeni isibhakabhaka. Uma uzokwenza ukubonwa okufishane nokungajwayelekile, akufanele ukubeka imali isikhathi esiningi. Ngokolunye uhlangothi, uma uzochitha ubusuku obude bokubheka uma kungcono ukuthi ube nesibonakude esihle. Ukuzimisela ukuchitha amahora amaningana ubuka akuyona into efanayo nokwenza ukubuka okusheshayo usuka ekhaya endaweni eseduze ukuze ubone izinkanyezi ezinkulu.
Ake sithi sinikela ngamahora amabili kulo msebenzi wokuzilibazisa. Akunangqondo ukuba nesibonakude esinezingxenye eziningi kakhulu ezine-mount equator noma ezithatha isikhathi eside ukuzijwayeza. Lezi zibonakude ziyinkimbinkimbi impela futhi zidinga ukufakwa esiteshini ngoba zinezingxenye eziningi. Ngakho-ke, sizothatha isikhathi eside ukuqaqa futhi siwaqaqe ngoba ekugcineni ngeke sikujabulele ngokwanele ukubonwa.
Uma sizogcina isikhathi esincane, kufanele siqale leso sikhathi ngokwengeziwe. Kungcono ukuba nesibonakude esiphathwayo esinentaba ye-altazimuth. Ngalo mqondo, uhlobo lweDobson yilona abawine kakhulu kule nkundla.
Ungayikhetha kanjani isibonakude ngokuya ngokubona kwakho
Gcina engqondweni uma uthanda ukubuka kwendabuko noma ubuchwepheshe bedijithali. Kukhona labo abathanda ukuhlala ngezinkanyezi ngendlela yesiko njengoba kwenza izazi zezinkanyezi zakudala. Kulokhu, ngesibonakude esenziwa ngesandla kanye namashadi asezulwini singachitha iminyaka sibuka isibhakabhaka. Abanye abantu bakhetha ukuthembela kubuchwepheshe futhi bakhetha umbono wokusebenzisa isibonakude kuselula futhi babuke izithombe ezikukhompyutha.
Singathola izinto esibhakabhakeni ngesandla noma wenze isibonakude senze wonke umsebenzi kithi. Inkinga ngobuchwepheshe ukuthi ingaba yinto ekhohlisayo. Ukusetshenziswa kwayo kungasenza sikhululeke ngokwengeziwe futhi kusenze singafundi isibhakabhaka noma singazi ukuthi singasiphatha kanjani isibonakude sisodwa. Ngakolunye uhlangothi, isibonakude semanuwali singenza izinto zibe nzima ngokwengeziwe ekuqaleni, kepha kufanele kuqashelwe ukuthi ukuthola umthala weminyaka ekhanyayo uwedwa kuvame ukuletha injabulo enkulu nokuzazi.
Zombili izinhlanganisela zamukelwa kepha kunzima ukuzihlanganisa eqenjini elilodwa. Kuzofanele sikhethe eyodwa noma enye. Uma isabelomali esinaso singaphakeme kakhulu, akukho okunye esingakwenza ngaphandle kokusebenzisa isibonakude esisebenza ngesandla. Uma isabelomali sethu sikhulu, sesivele singakhetha ukunethezeka okwengeziwe.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi ungayikhetha kanjani isibonakude.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Ungayikhetha kanjani isibonakude